Ahoana ny fomba fikarohana sy ampiasaina tsara amin'ny teny malaza Amazon?
Tiako ny manomboka ny lahatsoratra sy ny torolàlana momba ny fanavaozana Amazon sy ny fivarotana amin'ny angon-drakitra momba ny statistika raha heveriko fa ny laharana rehetra dia manala ny fisalasalan'ireo izay mbola misalasala raha mendrika ny hametraka ny raharahany amin'ity sehatra varotra ity na tsia.
Araka ny tarehin'ny indostria vao haingana, Amazon dia sehatra fampiroboroboana mivarotra an-tsena any Etazonia miaraka amin'ny 136 lavitrisa dolara amin'ny vidin'ny varotra amin'ny 2016. Raha ny ampahefatry ny 2016, ireo mpivarotra an-tserasera dia nitatitra kaonty mpanjifa maherin'ny 310 tapitrisa manerantany. Ny Amazon dia heverina ho marika tena manan-danja eran-tany ary ny mpanorina azy Jeff Bezos no mpanankarena manerantany miaraka amin'ny vola miditra amin'ny $ 91bn.
Fantatrao ve ny dikan'izany? Midika izany fa ny mpivarotra rehetra manakarama ny vokatra ao Amazonia dia manana fahafahana hanan-karena. Ny haben'ny lembenana dia miankina amin'ny fandinihana sy ny famadihana ireo mpikaroka izay mahita anao any amin'ny mpividy anao. Ny fikarohana amperinasa Amazon sy ny fikarohana amin'ny teny keywords dia afaka mamaha ireo olana roa ireo. Raha ny lisitry ny Amazon-nao dia nitaky ny teny sy ny fikarohana goavana indrindra, dia azonao ny isan'ny mpampiasa indrindra hahita sy hividy. Raha ny lisitrao dia tsy fahampian'ny teny fanalahidy mety sy voka-pifidianana na fampiasana tsy ara-barotra, dia very ny volanao sy ny mpanjifa mety ianao.
Izany no antony handinihantsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana fikarohana momba ny teny fanalahidy amin'ny Amazon bots, ary mampifandray azy ireo amin'ny kopia mivelatra mba hahatonga azy ho mora vakiana sy mazava ho an'ny mpampiasa azy.
Ahoana ny fampiasana ireo teny fototra am-pitokisana an'i Amazon?
Raha ny vokatrao fotsiny fotsiny amin'ny Amazon, dia mety ho very vola be ianao. Raha ny vokatrao no tena sarobidy, dia mila manao tsara ny Amazon ianao. Na izany aza, tsy ampy ny manao sary ny zavatrao ary manoratra lisitra. Mila miasa mafy ianao eo ambanin'ny lisitry ny fanamafisana mba hahatonga azy ho niova fo sy hivarotra. Ankoatr'izay, mila manatsara ny kalitaon'ny mpanjifanao sy ny fandefasana ny mpanjifa ianao. Araka ny asehon'ny fampiharana, ireo mpivarotra izay mahavita ny zava-drehetra handao ny mpanjifany dia hahazo ny vola miditra indrindra amin'ny Amazon.
Noho izany, andeha hodinihintsika fohifohy ny Amazon anatomy sy ny fomba hahatonga ireo robots sy mpampiasa hifaly.
Lisitry ny Amazon dia ahitana ireto fizarana manaraka ireto - lohateny, vidin'ny, bala, famaritana, sary, ary references. Ireo sehatra rehetra ireo dia mendrika ny fiheveranao manokana momba ny fanatsarana ny fikarohana.
Ny lohatenin-dahatsoratra no zavatra voalohany mety hahasarika ny mpikaroka Amazon. Na izany aza, ny famoronana ny lohateninao dia tokony ho ao an-tsainao ihany tsy ny mpikaroka Amazon fotsiny ihany fa Amazon bots ihany koa izay mijery ny lohatenin'ny vokatra mba hampisehoana ny vokatra manan-danja indrindra amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa.
Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa sy ny bots, dia mila mamorona lohateny manan-danja, mamaritra ary mamaky ianao, ka ao anatin'izy ireo ny tadiavina fikarohana, ny karazana vokatra, ny haben'izy ireo, ny lokony, ary ireo toetra hafa manan-danja.
Amazon dia manome mpivarotra an-tserasera amin'ny alalan'ny lesona momba ny fanatsarana ny lohateny..Ity lesona ity dia antsoina hoe "Fanatsarana ny lisitry ny fikarohana sy ny fikarohana," ary afaka mahita azy ianao eto .
Ny lafiny iray manan-danja amin'ny fanatrehanao matanjaka an'i Amazon dia ny politikan'ny fifaninanana fifaninanana. Ny sarany dia manamarina ny toeran'ny amboara Amazon ary manome anao fahafahana handresy Boky Buy. Azonao atao ny mahita "vidin'ny varotra" sy "ny vidinao" n Seller Central, izay ny fahafahanao mamorona "fahatsapana" fahatsapana. Na izany aza, raha mavesatra ny zavatrao, dia mety tsy ho tonga ny vidin'entana. Na inona na inona fandehanao, ataovy azo antoka fa toa azo itokisana. Ohatra, ny vidin'ny vola midina $ 200 hatramin'ny $ 170 dia mahazatra, fa ny vidin'ny vidin'ny $ 200 hatramin'ny $ 55 dia tsy mampino. Ny fifanakalozan-kevitra nataonao dia tsy tokony hiantso ny sandany hamaly ny marikao.
Mba hampitombo ny vokatra amam-pahefana ary hahazo hevitra tsara kokoa, azonao atao ny mametraka vidiny ambany noho ny salan'isa. Amin'ny fampivoarana ny varotra ambany kokoa, raisinao ny fahafahanao hahazo ny Amazon Buy Box ary ho lasa mpivarotra TOP ao amin'ny fonosanao.
Ankoatra izany, dia azo eritreretina ny mamorona ny lisitry ny coupon ampahibemaso mba hanomezana ireo mpanjifa tsy tapaka miaraka amin'ny fihenan-tsain-tsain-tsainy (tamin'ny 5% hatramin'ny 20% fihenam-bidy). Azonao atao ny manome valisoa amin'ny mpanjifanao mividy zavatra maromaro, hanomezana fihenam-bidy amin'ny fividianana faharoa.
Ny kalitaon'ny sary vokatrao dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny mpanjifa mividy fanapahan-kevitra. Izy ireo dia manao azy ireo tsindrio eo amin'ny lisitra fa tsy ny hafa. Ny Amazon dia manana ny fepetra takiana amin'ny kalitao sy ny haben'ny sary. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny pejy fanampiana Amazon amin'ny alalan'ity rohy ity .
Teo am-pialako, te-hanampy aho fa ireo mpivarotra Amazon tsy hividy ny vokatrao, mividy izay ataony ho azy ireo..Raha manana fomba fijery mahomby amin'ny lisitry ny paikady amazoninao amin'ny sary ianao, dia afaka maneho tranga hafa mampiasa ny vokatrao mba hampisehoana ny tena lanjany. Ankoatra izany, mandinika ny lanjany sy ny maha-tokana azy ireo. Tsara kokoa ny manakarama mpaka sary matihanina mba haka sary ny zavatrao.
Raha mahaliana anao ny mpanjifa ny zavatra amidinao, Diniho ny anaran'ny baolina. Mila mpitarika mandresy lahatra sy antsipirihany ny mpampiasa, izany no mahatonga azy ireo hijery ireo bala amin'ny bala. Ilainao ny manome azy ireo endri-javatra rehetra amin'ny endriny tsara indrindra. Ankoatra izany, toerana tsara indrindra ahafahanao mampiasa ny dikan-teny mitady vahaolana. Na izany aza anefa, aza maika loatra ny baolina amin'ny baolina fiteninao satria tsy hijery sary vetaveta izy ary mety hampiahiahy an'i Amazonia. Manaova fanamiana momba ireo bala telo voalohany, izay heverina fa azo vakiana indrindra, indrindra amin'ny fitaovana finday. Aza manombantombana ny toetran'ny zavatra mivarotra fa manaova lenta amin'ny tombontsoa voalohany.
Noho izany, raha mendrika ny vidin'ny tombotsoa raisina amin'ny vokatra azonao noho ny mpikaroka dia mividy.
Heveriko fa io fehintsoratra manokana io dia tokony hifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampiasana ny teny fanalahidy. Manasa ahy handinika ny soso-kevitra momba ny fikarohana nataonao ho piramida ianao. Ao amin'ny ambaratonga avo indrindra dia tokony hametraka ny fitadiavanao fitadiavam-bavaka ary azo ekena ny hampiditra azy ao anaty anaram-boninahitra iray. Avy eo, ny teny fanalahidy ao amin'ny bala misy anao sy ny famaritana. Ireo teny ireo ihany koa dia voasokajy ka izany no antony tokony hisongadinan'izy ireo ary tsy mifaninana loatra. Amin'ny ambany indrindra dia afaka mahita teny fikarohana hafa isika. Kitapo hafa izany.
Ny fananganana ny anaram-boninahitrao, ny bala, ny famaritana, ary ny sary dia hanamarina ny 80% amin'ny valim-pifidianana. Izany no antony tokony hametrahana ny teny fikarohana tsara indrindra anao eto. Ary raha manana fehezanteny sasantsasany izay mbola tsy nampiasaina ianao dia aza reraka ary ampidiro ireo saha fanampiny Source .